Impahla yangaphantsi → Impahla yokusebenzela • ubuchwephesha bobuchwephesha be-P & M
Impahla yangaphantsi esebenzayo inikezelwe ikakhulu kubantu abachanabeke kakhulu kwiimeko zangaphandle ezinzima, ezinje ngamaqondo obushushu asezantsi, umoya okanye iidrafti. Uninzi lweentengiso zevenkile zizinto zangaphantsi ezishisayo: Izikipa, iibhulukhwe zangaphantsi kunye neeseti. Impahla yangaphantsi esebenzayo yenziwa ngokuhambelana nemigangatho efanelekileyo.
Impahla eyilelwe ngale ndlela iqinisekisa inkululeko yokuhamba kunye nokuba sempilweni. Ngombulelo kwezi mpawu, ayisetyenziswanga kuphela emsebenzini, kodwa nangabathandi bezemidlalo basebusika. Ukongeza, iimveliso esizibonelelayo ziyafumaneka ngamaxabiso okhuphiswano ngenxa yobungakanani esi-odola kwivenkile yethu. Ukudityaniswa komgangatho ophezulu kunye nexabiso elinomtsalane kwenza ukuba iimpahla zangaphantsi zithandwe kakhulu kungekuphela nje ziingcali kodwa kunye neemfuno zabucala.
Impahla yangaphantsi esebenzisekayo elungiselelwe ngokugqibeleleyo umzimba
Impahla yangaphantsi esebenzisekayo, iseti yeengubo zangaphantsi kunye neebhulukhwe
Iingubo zangaphantsi iguquguquke kakhulu, ilingana ngokugqibeleleyo nomzobo. Ukulunga kwayo kukhululekile kangangokuba emva kwexesha elincinci uyinxibile, uyeke ukuziva. Izinto eziguquguqukayo ziqinisekisa inkululeko yokuhamba, ukuthintela naluphi na uloyiko lokubandezeleka. Nangona kunjalo, owona msebenzi uphambili wezo zinto zangaphantsi kukukhusela impilo kunye nomzimba kumaqondo aphantsi kunye nokupholisa umzimba.
Impahla yangaphantsi esebenziseka ngokukhawuleza yafumana uvelwano phakathi kwabathandi bezemidlalo kunye noosomashishini, iipropathi zayo zamkelwe ngokuqinisekileyo, ezonyusa ukuthandwa kwazo. Idityaniswe nezinye iimpahla ezifana sweatshirts, ibhulukhwe okanye jackethi ikuvumela ukuba ulawule ubushushu bomzimba kwiimeko eziguqukayo.
Iseti yempahla yangaphantsi eshushu, emnyama. I-PLN 38,69 iyonke
Ukususwa okusebenzayo kokufuma
Impahla yangaphantsi esebenzayo yenzelwe ukusebenzisa iitekhnoloji zakutshanje. Ngokukodwa ngabo abanoxanduva lokonwaba ngokukodwa. Enkosi ngokususwa kokufuma kubume obungaphandle, ilungile kwiimeko apho umsebenzisi abonisa ukwanda komzimba.
Ukufuma kuxutywe kwimaleko engaphandle, ebaluleke kakhulu kwimeko yomthambo omkhulu. Ukuhanjiswa okufanelekileyo kokufuma kunciphisa umngcipheko wevumba elibi.
Ukugcina ilinen icocekile kulula kakhulu, ayifuni ndlela ikhethekileyo okanye iiarhente zokucoca ezizinikeleyo, landela nje imigaqo elula kwileyibhile yemveliso ngokubhekisele kwiimeko zokuhlamba.
Iimpahla zangaphantsi ezisebenzayo, ibhulukhwe yeBrubeck
iimpahla zangaphantsi ezisebenza ngamadodailinen yokusebenzaiimpahla zangaphantsi zabasetyhiniimpahla yokunxiba eshushuyangaphantsi esebenzayo esebenzayoilinen yokusebenza efudumeleyoiimpahla zomsebenzi iimpahla zangaphantsi ezifudumeleyo